Fitsinjarana Anaconda: Fitaovana feno indrindra momba ny siansa momba ny angona miaraka amin'i Python | Avy amin'ny Linux
Luigys toro | | fampiharana, fandaharana
Tao anatin'izay andro vitsy lasa izay dia nandalina sy nampihatra lalina ny Fiteny fandaharana Python izay noresahintsika matetika tao amin'ny bilaogy, ny antony lehibe indrindra dia satria manana hevitra marobe tiako hambara aho ary izay no tiana hambara mandeha ho azy ny fizotrany amin'ny Linux saingy mety hitombo amin'ny rafitra miasa hafa izany.
Ity fandalinana rehetra ity dia nanome ahy fotoana hihaonana vaovao fitaovana, tetika ary torolàlana izay tena ilaina amin'ny mpandahatra programa Python, ka afaka andro vitsivitsy dia mety hizara lahatsoratra maromaro mifandraika amin'ity fiteny fandaharana lehibe sy matanjaka ity isika.
Fitsinjarana Anaconda dia iray amin'ireo fitaovana heveriko fa tokony ho fototry ny andian-dahatsoratra, satria heveriko fa izany ny suite feno indrindra momba ny siansa data miaraka amin'i Python ary manome antsika fampiasa marobe izay ahafahantsika mampivelatra ny fampiharana amin'ny fomba mahomby sy haingana ary mora kokoa.
3 Ahoana ny fametrahana Anaconda Distribution?
Anaconda Izany dia Open Source Suitena izay ahitana andiana fampiharana, famakiam-boky ary foto-kevitra natao ho an'ny fampandrosoana ny Data science miaraka amin'i Python. Amin'ny tsipika ankapobeny Anaconda Distribution dia fizarana Python izay miasa amin'ny fitantanana tontolo iainana, mpitantana fonosana ary manana fanangonana fonosana open source 720 mahery.
Anaconda Distribution dia voasokajy ho sehatra 4 na vahaolana ara-teknolojia, Anaconda Navigator, Tetikasa Anaconda, Ny trano famakiam-boky momba ny siansa y Conda. Ireo rehetra ireo dia apetraka ho azy ary amin'ny fomba fanao tena tsotra.
Rehefa mametraka Anaconda isika dia hanana ireo fitaovana rehetra efa voalamina azo alaina ireo, azontsika atao ny mitantana azy amin'ny alàlan'ny mpampiasa Navigator misy sary na afaka mampiasa Conda ho an'ny fitantanana amin'ny alàlan'ny console. Azonao atao ny mametraka, manala na manavao ireo fonosana Anaconda rehetra amin'ny tsindry vitsivitsy ao amin'ny Navigator na amin'ny baiko tokana avy amin'ny Conda.
Ity Suite for Data Science miaraka amin'ny Python ity dia manana fiasa marobe, izay ahafahantsika manasongadina ireto manaraka ireto:
Loharano malalaka, loharano misokatra, miaraka amin'ny antontan-taratasy feno tsipiriany sy vondrom-piarahamonina mahafinaritra.
Multiplatform (Linux, macOS ary Windows).
Mamela anao hametraka sy hitantana fonosana, fiankinan-doha ary tontolo iainana ho an'ny siansa data miaraka amin'i Python amin'ny fomba tena tsotra.
Manampy amin'ny famolavolana tetikasa siansa momba ny angona amin'ny alàlan'ny IDE isan-karazany toy ny Jupyter, JupyterLab, Spyder, ary RStudio.
Izy io dia manana fitaovana toa an'i Dask, numpy, pandas ary Numba handinihana Data.
Izy io dia ahafahana maka sary an-tsaina ny angona miaraka amin'i Bokeh, Datashader, Holoviews na Matplotlib.
Fampiharana maro karazana mifandraika amin'ny maodely fianarana sy fianarana.
Anaconda Navigator dia mpizara mpampiasa sary GUI somary tsotra nefa manana pototra lehibe.
Azonao atao ny mandroso fonosana mifandraika amin'ny siansa miaraka amin'ny Python avy ao amin'ny terminal.
Manome fahaizana miditra amin'ny loharanom-pahalalana mandroso kokoa.
Esory ny olana miankina amin'ny fonosana sy ny fanaraha-maso ny kinova.
Izy io dia manana fitaovana mamela anao hamorona sy hizara antontan-taratasy izay misy kaody miaraka amina fanangonana mivantana, fampitahana, famaritana ary fanamarihana.
Ahafahanao manangona Python amin'ny kaody milina ho fanatanterahana haingana.
Manamora ny fanoratana ny algorithma mifanindran-dàlana sarotra amin'ny fanatanterahana asa.
Izy io dia manana fanohanana amin'ny informatika avo lenta.
Ny tetik'asa dia azo entina, mamela anao hizara tetikasa amin'ny hafa ary hampandeha tetikasa amin'ny sehatra samihafa.
Manatsotra haingana ny fampiharana ireo tetik'asa siantifika.
Ahoana ny fametrahana Anaconda Distribution?
Mora ny mametraka ny Distribution Anaconda, mandehana fotsiny any Fizarana fampidinana Anaconda Distribution ary ampidino ny kinova tianao (Python 3.6 na Python 2.7). Vantany vao sintonina dia manokatra terminal izahay, mankany amin'ny lahatahiry mifanaraka amin'izany ary manatanteraka ny andrana fametrahana miaraka amin'ilay kinova mifandraika amin'izany.
Soloy amin'ny anaran'ny bash alaina
Avy eo tsy maintsy manindry isika enter hanohy, ekenay miaraka amin'ny yes, manamafy ny lahatahiry izay hametrahana Anaconda izahay ary farany misafidy yes hany ka ny Anaconda no lohalaharana amin'ny Python an'ilay masinina.
Avy amin'ny terminal izahay no mihazakazaka ny Anaconda Navigator miaraka anaconda-navigator ary afaka manomboka mankafy ilay fitaovana isika araka ny hita ao amin'ny galeriana manaraka.
Toy izany koa, azonao atao ny mampiasa ity manaraka ity Lisitry ny baiko Conda hahafahanao mametraka sy mitantana fonosana amin'ny fomba haingana be.
Ity Tool Suite ity dia natao ho an'ny Science Science miaraka amin'i Python fa ilaina ho an'ny ankamaroan'ny mpamorona python, manana rindranasa sy fonosana marobe izay hahafahantsika mahomby kokoa.
Betsaka ny fonosana sy kojakoja izay misy ao amin'ny Distrikan'i Anaconda no hojerena amin'ny antsipiriany amin'ny lahatsoratra isan-karazany izay havoakanay, antenaiko fa mahaliana anao ity faritra ity ary aza adino ny mamela anay ny hevitray sy ny hevitrareo momba izany ao anatin'ireo fanehoan-kevitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Fitsinjarana Anaconda: Fitaovana feno indrindra momba ny siansa momba ny angona miaraka amin'i Python
Jorge Alvarez dia hoy izy:
Ao amin'ny Windows eny Anaconda, fa amin'ny Linux dia hitako fa mora kokoa ny mametraka avy amin'ireo tahiry, tafiditra ao anaty rafitra izy io, mora kokoa ny mametraka azy. Farafaharatsiny mba hampiasana pandas, numpy ary Jupyter Notebook fototra omeko anao dia tsy nanana olana aho
Mamaly an'i Jorge Álvarez
Edwin Enrique Vargas dia hoy izy:
Kadiry tena tsara!
Valiny tamin'i Edwin Enrique Vargas
Thaizir El Troudi dia hoy izy:
Azo atolotra ho antsika izay manomboka amin'ny python ve izany?
Valiny tamin'i Thaizir El Troudi
Torohevitra avo lenta ho an'ireo izay manomboka amin'ny python, misy fitaovana j antsoina hoe jupyter notebook izay napetraka miaraka amin'ny Anaconda Distribution ary heveriko fa mety indrindra amin'ny fianarana sy fandraisana an-tsoratra amin'ny python… Tsy ho ela dia hanana lahatsoratra momba an'ity fitaovana ity izahay.
Hiandry azy aho.
Salama aho tsy afaka mihazakazaka anaconda-navigator amin'ny terminal
Mamaly an'i Maxi
Manana olana mitovy amin'izany aho.
Fabio Gaviria dia hoy izy:
alohan'ny hanokafan'izy ireo azy ihany no ataonao voalohany.
loharano $ ~ / .bashrc
Ary avy eo raha nosokafany ara-dalàna izy ireo araka ny hita etsy ambony.
Valiny tamin'i Fabio Gaviria
Diego Silberberg dia hoy izy:
Fanontaniana, inona ny fantsona telegram an'ny desdelinux ???
Valiny tamin'i Diego Silberberg
sadalsuud dia hoy izy:
Fanontaniana tena tsara ity, izay notadiaviko dia tsy nahita na inona na inona aho
Mamaly an'i sadalsuud
Amin'izao fotoana izao dia tsy manana olana amin'ny fitantanana izahay, fa mieritreritra ny hanana izany haingana araka izay tratra. Mba hampidiran'ny fiarahamonina.
Nametraka Anaconda3 amin'ny LinuxMint 18.2 manokatra mpitsikilo aho ary hitako fa mamela ahy hiditra amin'ny kapila mangidy fotsiny aho. Tsy hitanao ilay USB. Ahoana no fomba hikirako ity safidy ity? Veloma finaritra
Virtual Machines dia hoy izy:
Fampianarana mahafinaritra. Namorona milina Lubuntu + Anaconda aho miaraka amin'ny zavatra rehetra efa handeha.
Nozaraiko raha sanatria mahasoa: https://github.com/Virtual-Machines/Anaconda-VirtualBox
Valio ireo milina virtoaly
Alao an-tsaina hoe: compresseur sary mahatalanjona miaraka amin'ny interface maoderina